Nbudata Enstrom 280FX FSX - Rikoooo
downloads 12 570
Onye edemede: Ihe anakpo Eagle Rotorcraft, 2D na panti VC nke Pierre FASSEAUX
Emelitere na 22 / 08 / 2019: Ndakọrịta na Prepar3D v4. Ihe ogugu ọhụrụ nke 2D / VC nke Pierre FASSEAUX mepụtara. Auto-installer 10.5
Na oge mbụ na akụkọ ntanetị nke Microsoft Flight Simulator, onye nrụpụta emepụta ma wepụta helikọpta Enstrom add-on. Ugo ihe ngosi Eagle Rotorcraft (na nkwekorita ya na Rikoooo) nwere mpako ịbụ onye mbido izizi nye ụgbọ elu simulation ụgbọ elu Enstrom 280FX dị elu maka FSX Mee ngwangwa na mmekorita Prepar3D v4 +. Njirimara gụnyere FSX ụdị ụmụ amaala nwere ihe eserese, usoro egwu na nke nkịtị, avionics omenala na ọtụtụ ndị ọzọ.
The Enstrom F-28 na 280 bụ otu ezinụlọ nke obere, ìhè pistin-engined helicopters emepụta site na Enstrom Helicopter Corporation.
Biko gụọ ntuziaka gụnyere.